7 Su'aalood oo la Weydiiyo Hay'addaada Kahor Intaadan Saxeexin | Martech Zone
Axad, Nofeembar, 23, 2014 Axad, Nofeembar, 23, 2014 Douglas Karr
Waxaan jecel nahay la shaqeynta hay'adaha kale. Khibradayada ku saabsan kor u qaadista mashiinka raadinta iyo istiraatiijiyadda nuxurka waxay kheyraad u ahayd dhammaan wada-hawlgalayaasha hay'addayada waxaanan sii wadeynaa kobcinta qaybta ganacsigeenna. Waxaan la shaqeynaa wax badan oo horumar weyn ah, naqshadeynta iyo xiriirka dadweynaha iyo waxa aan ka wada simanahay dhammaantood waa raadinta natiijooyinka ganacsiga.
Iyadoo aan la helin natiijooyin ganacsi, hay'addaadu si fudud macno malahan. Goob la habeeyay oo aan loo rogi karin waxtar ma leh. Bog qurux badan oo aan la helin waa wax aan faa'iido lahayn. Cilmi baaris, nashqadeyn iyo qorid aad si xoogan ugu bixisay taas oo aadan soo celin karin waa wax aan faa'iido lahayn (wixii ka dambeeya daabacaadii hore).
Waxaan si isdaba joog ah uga naxnay tirada macmiisha ee noo imaaday oo ku dhowaadba ku qaatay dhammaan miisaaniyadooda laakiin aan ogaanayn natiijooyinka. Filashada nalooga baahan yahay waa inaan qaadno wixii lacag ah ee haray iskuna dayno inaan natiijooyin ku helno. Waqtiyada qaarkood, si fudud ugama dhigi karno inay shaqeyso.
Taasi waa sababta qaabkeena ganacsi uu xoogaa gaar ah ugu yahay warshadaha. Waxaan ka qaadnaa waxqabadyada khidmadaha fidsan ka dibna waxaan u shaqeynaa natiijooyinka. Inta badan macaamiisheenu waxay qarash gareeyaan kharashka hal shaqaale, laakiin waxay leeyihiin kooxdeena iyo dhamaan la-hawlgalayaashayada oo ka shaqeynaya sidii loo hubin lahaa in la gaaro natiijooyinka ganacsi ee la qiyaasi karo.
Kahor intaadan saxiixin qandaraaskaaga xiga hay'ad, waxaan kugu dhiirrigalinaynaa inaad weydiiso su'aalaha soo socda:
Maxay yihiin macaamiisha kale ee ay kula shaqeeyeen warshadahaaga? Waxaad u maleyn kartaa inaan weydiisanayo isku dhacyo ka dhalan kara, laakiin taasi maahan sababta kaliya. Kuweena hay'adda waxay sii wadaa inay lahaato guul aan caadi aheyn oo laxiriira shirkadaha laxiriira tikniyoolajiyadda suuq geynta laakiin waxaan si hoose ula dhacnay qaar kamid ah shirkadaha wax soo saarka B2C. Sababtaas awgeed, waxaan diirada saareynaa hal qeyb oo qofkasta oo raba inuu nala shaqeeyo banaanka qeybtaas sifiican ayaa loo ogeysiiyaa si loo hubiyo inaan la kulmi karno waxa ay filayaan.
Ayaa iska leh faylasha galka? Tani badanaa waa dhibaatada ugu weyn ee aan la kulanno. Hay'addu waxay qaabeyn doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay laakiin waxay ilaalinayaan lahaanshaha iyo xakameynta dhammaan faylasha ilaha. Ma rabtaa inaad shaqada ku celiso? Waa inaad weydiisaa hay'adda. Ma rabtaa inaad ka tagto hay'adda? Markaa waa inaad dib u bilowdaa mar labaad. Aad u jahwareersan. Ku haysashada macaamiishaada afduub maahan sida aad u kobcinayso ganacsigaaga.
Maxaa dhacaya markay shaqeyn weydo? Hay'ad kastaa waxay dhiirrigelisaa shaqada weyn ee ay qabato laakiin badanaa kama hadlaan guul darrooyinka. Waxaan sidoo kale qaybteenna soo qaadanay. Su’aashu waxay tahay maxaa xigi doona. Haddii aad ka shaqeyneyso shaandheyn, waxaa laga yaabaa inaad mar labaad lacag siiso hay'adda hadda jirta ama mid cusub si aad isugu daydo inaad hesho waxaad u baahan tahay. Waxaan u shaqeynaa khidmad fidsan si markaas cadaadiska naloo saaro inaan u gaarsiino. Xaaladda ugu xun, macaamiishayadu sidoo kale way ogyihiin sida aan u dhammeyno ballanqaadyadeena ka hor inta aysan waligood saxiixin (waxaan sameyneynaa istiraatiijiyad buuxda, warbixinno, dukumiintiyo, iyo hanti).
Maxaa ku jira, maxaa siyaado ah? Waxaa i qarxiyay inta shirkadood ee soo bandhiga bogag ama istiraatiijiyad kaliya si aan u ogaado in mashruucu aanu ku fiicnayn raadinta ama moobiilka. Markii la xujeeyo, wakaaladda ayaa ku jawaabeysa, "Ma aadan dalban taas." Huh? Makaa dhab baa? Haddii wakaaladdaadu ay raadineyso macaamiishaada, waxaad ku adkeysan doontaa inaad sameyso wax walba si loo kordhiyo natiijooyinka ganacsiga.
Sideen u maamulnaa lahaanshaha? Waa caadi haddii aad leedahay hay'ad iibsanaysa domains, martigelin, mawduucyo, ama sawir kayd ah… laakiin yaa iska leh? Ma jiraan wax ka xun hay'ad ka jawaab celinaysa oo la socota boggaaga (haa, wali way dhacdaa). Hubso inaad haysatid heshiis bir ah oo meesha yaal oo ah inaad wax lahaansho adigu iska leedahay. Waa sababta aan inta badan macaamiishayada uga helno kaarka deynta oo aan adeegyadooda ugu soo iibsanno magacyadooda. Haysashada cinwaan e-mayl kooxeed meesha aad ku dari karto / ka saari karto hay'addaadu waa hab fiican oo lagu maareeyo akoonnadaas oo aanad weligood lumin doonin.
Qalab noocee ah ayey adeegsanayaan? In kasta oo aan si gaar ah u cayilnay meheradaha macaamiisheenna, haddana weli waan u furan nahay oo daacad baannu kula nahay iyaga oo ku saabsan qalabka aan isticmaaleyno. Faa'iidada aan u leenahay wakaalad ahaan waa inaan ka iibsan karno shatiyada shirkadaha barnaamijyada aan ugu adeegno dhowr macaamiil. Kalidaa, macaamiishayadu ma awoodi doonaan inay awood u yeeshaan laakiin wadajir ahaan waxaan u siin karnaa marin. Kani maahan oo keliya inay macaamiisheenna siiso faham ku saabsan qiimaha aan qoob-ka-ciyaareyno, sidoo kale waa inay iyagu naftooda u arkaan tayada iyo sumcadda qalabka aan adeegsaneyno.
Sidee kale ayaa ay kuu caawin karaan? Waa hagaag - Waxaan ahaa taban ilaa iyo haatan sidaa darteed aan helno wax wanaagsan. Waxaad layaabi laheyd mararka qaarkood hibada ballaaran iyo mashaariicda hoosta suunka hay'adda. Anaga ayaa iska leh qaladkeena, laakiin mararka qaar waxaan ogaanaa macmiilkeena hada jira inuu kireysto ilo kale oo shaqo oo aan ku dhameystiri karnay. Ma jiraan wax intaa ka sii wareer badan! Hubso inaad la xiriirto hay'adahaaga shaqada weyn ee ay qabanayaan iyo meelaha kale ee diiradda la saarayo ee ay khibradda u leeyihiin. Maadaama aad horey xiriir u laheyd, ku darista adeegyada kale iyo mashaariicda inta badan way ka fududdahay bilowga cusub ee ilaha cusub.
Waxaan wadaagnay sheeko qosol badan markii aan dib u laabanay mararka qaarkood cilaaqaadka macaamilka in hay'aduhu galaan. Laakiin xadgudubku wuxuu ku dhici karaa labada daraf xiriir kasta waana lama huraan in hay'addaadu aysan kugu xadgudbin. Kaliya maahan istaraatiijiyaddaadu inay dhibaato ka soo gaarto, laakiin waxaad lumin kartaa miisaaniyadda sidoo kale.
Waxaan u maleynayaa in tan oo dhan lagu soo koobi karo hal su'aal. Hay'addaadu ma waxay ka shaqeyneysaa inay hubiso natiijooyinkaaga ganacsi ama kuwa ay iyagu leeyihiin? Waxaan aaminsanahay markay macaamiisheena ka faa'iideystaan, sidaas oo kale waan sameyneynaa do markaa taasi marwalba waa mudnaanteena.
Tags: hay'addadhibaatooyinka wakaaladasu'aalaha hay'addaxiriirka hay'adaha
Nov 27, 2014 at 3: 16 AM
Marka waa 2am Thanksgiving iyo maya Habeenkii oo dhan kamaan soo dirin email-ka qofkasta oo aan ku mahad naqo inkasta oo aan sidaas ku sameeyo ducada. Weli waxaan nadiifinayaa emaylka anigoo ah 1-nin gaang ah oo dhisaya macaash doon oo websaydh ah waxaan rajeynayaa in la bilaabay horaantii sanadkaan cusub. Faalladayda halkan ku saabsan ee Doug waa mahadsanid dadweynaha, qoraalkiisa hadda ee ka tarjumaya hufnaanta, koodhka anshaxa iyo hufnaanta taas oo aan markii ugu horreysay soo jiitay dhowr sano markii aan labadeenaba si firfircoon u taageernay "Yaraantii Indiana" ka hor soo bixitaankii Facebook. Hawlgabnimo horudhac ah iyo ka soo kabasho wadno-qabad ayaa igu jihaystay cutubkeygii ugu dambeeyay ee Ilaahay, 10-ka rodol ee hawlgabka naafada Havanese, Amniga Bulshada iyo kumbuyuutar qaada masaafad ka badan qaaditaankeyga Anigu waxaan ahay maahmaahda maahmaahda laakiin ugu dhakhsaha badan waxaan bartay eBay inuusan noqon doonin xirfad cusub laakiin khibradaha noloshu waxay i siisay jeclaan eCommerce, aad ayaan u jeclahay inaan mar kale u hogaamiyo Rugta Ganacsiga oo aan la shaqeeyo milkiileyaasha ganacsiyada laakiin waxay ku kooban yihiin kaliya madax-bannaanida iyo Indiana ku saleysan. Maaddaama mashruucaygu noqday mid xiiso leh sidoo kale jeclahay iyo xushmadba Douglas Karr iyada oo loo marayo qoraallada uu ku daabaco baraha bulshada iyo sidoo kale boggaggiisa. Isagu kama warqabo sida khibradiisa xirfadeed uusan ugu adkeynin barbaro isaga sida Doug qofka. Waa wax lala yaabo in kumbuyuutar kumbuyuutar dhammeystiran uu ka helo qaraabo nuucaan ah shaqsi caan ah oo caan ah Geeker, qof aad inta badan dareento inuu ahaa saaxiib weligiis ah iyo lataliye inta aad ogaatid wadahadal fool ka fool ah laba jeer oo keliya sannadahan. Haa, isagu waa jidh ahaan sida aan uga helo khadka tooska ah ee blog-yada iyo shakhsiyaadka warbaahinta bulshada sidaa darteed araggiisa inta badan looma baahna in la dareemo kalsooni inuu runtii yahay heshiiska dhabta ah. Waxaan wadaagnaa waxyaabo badan oo neceb iyo waxyaabo aan jeclayn haddana mararka qaarkood si cad uma diiddanno; (Xusuusnow waxaan ahay qirasho aan laheyn milkiile kumbuyuutar aqoon sidaa darteed maahan barometer cadaalad ah,) laakiin aragtiyaheena diimeed, akhlaaqiyadeed, bulsho, dhaqan iyo siyaasadeed ayaa inta badan aad isugu dhow oo sameeya kalsoonida aqbalida fikradihiisa xirfadeed iyo hagitaankiisa. Waa Thanksgiving-ka mar labaadna waxaan ku arkaa hufnaan ka dhex jirta baloogga ayaa ii keenaya inaan la wadaago isbadbadal shakhsi ahaaneed adiga iyo adigaba.